AF-SOOMAALI – All Bajuni
Galmudug waxaa gaaray qaar kamid ah ciidamada ilaalada gaarka ah ee Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la filayo in isna goordhaw gaaro magaalada Dhuusomareeb. Ciidamada ilaalada u ah Madaxweynaha Jubbaland oo ku hubeesnaa hubka fudud ayaa markii ay gaar... More »
Shirkii wadatashiga madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, halkaas oo laga dareemayo qaban qaabada soo dhowaynta madaxda shirka. Magaalada Dhuusomareeb ayaa dhinaca kale waxaa buux ... More »
Beesha Carab Soomaali oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa kulan ay magaalada Muqdisho ku qabteen waxay kaga arrinsadeen sidii beeshu u raadsan lahayd xuquuqda siyaasadeed ee kaga maqan dowladda federalka iyo maamulada. Kulankaan oo ay soo qaban qaabiyeen hog... More »
Koyama island waxay Kisimayu u jirta 40 Km More »
Kenya ayaa ku guuleysatay kursiga Golaha Amniga ee UN kadib markii ay ku garaacday Jabuuti wareega labaad ee codeynta oo dhacday Khamiistii maanta. Tartankii u dhexeeyey Kenya iyo Jabuuti ayaa u gudbay wareegii labaad ee codeynta maanta, kadib markii wajiga ko... More »
Shirkii wada-hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socday Waddanka Jabuuti ayaa caawa labadii dhinac ku kala saxeexdeen waxa loo yaqaan Minutes-ka, kaasi oo ah is afgarad hordhac ah oo labada dhinacba isla qaateen. Sidoo kale waxay sheegeen in laysla qaatay... More »
Madaxweyne Geelle oo ka hadlay shirka beri u furmaya Madaxda Somalia & Somaliland
Kulan heer sare ah ayaa la filayaa inuu maalinta berrito ah uga furmo dalka Djibouti wufuud heer sare ah oo ka socda Somaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shaaciyay in maalinta berri ah uu shir guddoomin doono kulan u dhax... More »
Al-shabaab oo markii ugu horeysay hirgalisay xarun loogu talo galay Covid19
Kooxda Al-shabaab ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaadday in ay fureen goob karantiil iyo xarun daryeel oo lagula dagaalamayo COVID-19, Waxayna tani muujinaysaa in kooxdu ay si dhab ah u dareentay faafidda cudur Al-Shabaab ayaa shaaciyay in xaruntan laga sa... More »
Mareykanka oo juhdi adag ku bixinaya kulanka Farmaajo iyo Biixi oo isbuuca soo socda ka dhici doona Jabuuti
Isbuuca soo socda ayaa la rajeynayaa in ay kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweyne Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kulankaas oo qorshahu yahay inuu ka dhaco Jabuuti. Ilo ku dhow Villa Somalia oo diiday inaan magacooda isticma... More »
Safiirkii hore ee Mareykanka oo weerar culus ku qaaday DF, digniin adag-na u diray
Safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa weerar culus ku qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, oo uu ku eedeeyey inay xasillooni darro ka abuurtay dalka. Stephen Schwartz, oo ka jawaabay qoraalkii safaaradda Mareykanka ay madaxweyne Fa... More »
Mareykanka oo taageeray go’aankii Aqalka sare ee Soomaaliya
War qoraal ah oo kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu taageeray hadalkii dhowaan kasoo baxay Guddoomiyaha Aqalka sare ee Soomaaliya ee ahaa in kulan deg deg ah oo looga arrinsanayo xaaladda dalka iyo kala guurka siyaasadeed. Mareykanka ayaa madaxda sare e... More »